Sunscreen နဲ့ Sunblock တို့ရဲ့ခြားနားချက်က ဘာတွေလဲ
31 Aug 2018 . 4:50 PM
မိန်းကလေးတွေဟာ ဖြူစင်ချောမွေ့တဲ့ ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် နေ့စဉ်အလှအပထိန်းသိမ်းမှုတွေကို ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာ နေရောင်ခြည်မှာ ပါဝင်တဲ့ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV Rays)နဲ့ တိုက်ရိုက်မထိစေဖို့ ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းရပါတယ်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (UV Rays) ထိပြီး နေလောင်ဒဏ်မခံရစေဖို့အတွက် မိန်းကလေးတွေဟာ နေ့စဉ် Sunscreen (သို့) Sunblock တို့လို နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ Skincare Product တွေကို အလှအပရေးရာမှာ မရှိမဖြစ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုရပါတယ်။ အဲဒီလို အသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာ တချို့က Sunscreen နဲ့ Sunblock ကိုအတူတူထင်ပြီး ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီး အသုံးပြုကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ အမှန်မှာတော့ ဒီနှစ်ခုဟာ ကွဲပြားတဲ့အတွက် ကွဲပြားခြားနားချက်ကို သေသေချာချာသိရှိနားလည်ထားပြီး ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက် ကွဲပြားခြားနာချက်တွေကို လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်….
Sunblock နဲ့ Sunscreen ဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ နေရောင်ဒဏ်ကာကွယ်လိမ်း Lotion အမျိုးအစားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Sunblock က Organic ပစ္စည်းတွေနဲ့ကော Non-organic ပစ္စည်းတွေနဲ့ကော ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားပြီး အရေပြားကို ဒိုင်းလို အကာကွယ်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Sunscreen မှာ ပါဝင်တဲ့ PABA( para- aminobenzoic Acid) က အခန့်မသင့်ရင် အရေပြားကို ဓာတ်မတည့်မှုတွေ၊ Allegries တွေ ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်ရဲ့အသားအရေက Sensitive ဖြစ်လွယ်တတ်ဆိုရင် Sunscreen အစား Sunblock ကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါအပြင် Sunblock ဟာ အသားအရေဆီကို UVB rays မရောက်ရှိလာစေဖို့အတွက် အဓိက ကာကွယ်ပေးပါသေးတယ်။
Sunscreen မှာတော့ မျက်နှာအသားအရေ အတွင်းပိုင်းအလွှာထိကို ပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ Ultraviolet A (UVA) rays တွေဝင်ရောက်လာမှုကို စုပ်ယူပေးနိုင်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Sunscreen ကို တော်တော်များများက Chemical Sunscreen ဆိုပြီး ခေါ်တတ်ကြပါတယ်။ Sunscreen ကို လိမ်းလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပြီး လိမ်းထားမှန်း မသိသာစေပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Sunscreen ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ နေရောင်ခြည်နဲ့ အသားအရေထိတွေ့ပြီး အချိန်အတော်ကြာလာရင် အာနိသင်ပျက်ပြယ်သွားတတ်တဲ့အတွက် ပြန်ပြန်ပြီးတော့ လိမ်းပေးဖို့ လိုအပ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Sunscreen နဲ့ Sunblock နှစ်ခုစလုံးကတော့ အသားအရေကို နေလောင်ဒဏ်မခံရစေဖို့အတွက် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အသားအရေက အထိခိုက်မခံဘူး Sensitive ဖြစ်လွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို သေချာရွေးချယ်ပြီး အသုံးပြုပေးသင့်ပါတယ်။ သာမန်အသားအရေမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အမျိုးအစားကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး ဝယ်ယူအသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကော ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့ နေလောင်ဒဏ်ကာကွယ်ဆေးကို ရွေးချယ်ပြီး သုံးလေ့ရှိလဲဆိုတာကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦး။
Sunscreen နဲ့ Sunblock တို့ရဲ့ခွားနားခကျြက ဘာတှလေဲ
မိနျးကလေးတှဟော ဖွူစငျခြောမှတေဲ့ ပွဈမြိုးမှဲ့မထငျ အသားအရကေို ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့အတှကျ နစေ့ဉျအလှအပထိနျးသိမျးမှုတှကေို ဂရုတစိုကျပွုလုပျကွပါတယျ။ အဲဒီလိုထိနျးသိမျးတဲ့အခါမြိုးမှာ နရေောငျခွညျမှာ ပါဝငျတဲ့ ခရမျးလှနျရောငျခွညျ (UV Rays)နဲ့ တိုကျရိုကျမထိစဖေို့ ဂရုတစိုကျ ထိနျးသိမျးရပါတယျ။ ခရမျးလှနျရောငျခွညျ (UV Rays) ထိပွီး နလေောငျဒဏျမခံရစဖေို့အတှကျ မိနျးကလေးတှဟော နစေ့ဉျ Sunscreen (သို့) Sunblock တို့လို နလေောငျဒဏျကာကှယျပေးတဲ့ Skincare Product တှကေို အလှအပရေးရာမှာ မရှိမဖွဈ ထညျ့သှငျးအသုံးပွုရပါတယျ။ အဲဒီလို အသုံးပွုကွတဲ့အခါမှာ တခြို့က Sunscreen နဲ့ Sunblock ကိုအတူတူထငျပွီး ဘယျဟာပဲဖွဈဖွဈဆိုပွီး အသုံးပွုကွတာ တှရေ့ပါတယျ။ အမှနျမှာတော့ ဒီနှဈခုဟာ ကှဲပွားတဲ့အတှကျ ကှဲပွားခွားနားခကျြကို သသေခြောခြာသိရှိနားလညျထားပွီး ကိုယျ့လိုအပျခကျြနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ အမြိုးအစားကို ရှေးခယျြဝယျယူ သုံးစှဲသငျ့ပါတယျ။ အဲဒီလို ရှေးခယျြဝယျယူသုံးစှဲနိုငျဖို့အတှကျ ကှဲပွားခွားနာခကျြတှကေို လလေ့ာကွညျ့လိုကျကွရအောငျ….
Sunblock နဲ့ Sunscreen ဟာ ကှဲပွားခွားနားတဲ့ နရေောငျဒဏျကာကှယျလိမျး Lotion အမြိုးအစားတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ Sunblock က Organic ပစ်စညျးတှနေဲ့ကော Non-organic ပစ်စညျးတှနေဲ့ကော ပေါငျးစပျပွုလုပျထားပွီး အရပွေားကို ဒိုငျးလို အကာကှယျပွုလုပျပေးထားပါတယျ။ Sunscreen မှာ ပါဝငျတဲ့ PABA( para- aminobenzoic Acid) က အခနျ့မသငျ့ရငျ အရပွေားကို ဓာတျမတညျ့မှုတှေ၊ Allegries တှေ ဖွဈစတေတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ကိုယျရဲ့အသားအရကေ Sensitive ဖွဈလှယျတတျဆိုရငျ Sunscreen အစား Sunblock ကို အသုံးပွုပေးလို့ ရပါတယျ။ ဒါအပွငျ Sunblock ဟာ အသားအရဆေီကို UVB rays မရောကျရှိလာစဖေို့အတှကျ အဓိက ကာကှယျပေးပါသေးတယျ။
Sunscreen မှာတော့ မကျြနှာအသားအရေ အတှငျးပိုငျးအလှာထိကို ပကျြစီးအောငျပွုလုပျနိုငျတဲ့ Ultraviolet A (UVA) rays တှဝေငျရောကျလာမှုကို စုပျယူပေးနိုငျတဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးတှနေဲ့ ပွုလုပျထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ Sunscreen ကို တျောတျောမြားမြားက Chemical Sunscreen ဆိုပွီး ချေါတတျကွပါတယျ။ Sunscreen ကို လိမျးလိုကျတဲ့အခါမြိုးမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိပွီး လိမျးထားမှနျး မသိသာစပေါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Sunscreen ရဲ့အားနညျးခကျြကတော့ နရေောငျခွညျနဲ့ အသားအရထေိတှပွေီ့း အခြိနျအတျောကွာလာရငျ အာနိသငျပကျြပွယျသှားတတျတဲ့အတှကျ ပွနျပွနျပွီးတော့ လိမျးပေးဖို့ လိုအပျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
Sunscreen နဲ့ Sunblock နှဈခုစလုံးကတော့ အသားအရကေို နလေောငျဒဏျမခံရစဖေို့အတှကျ ကာကှယျပေးတဲ့ ပစ်စညျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ အကယျ၍ အသားအရကေ အထိခိုကျမခံဘူး Sensitive ဖွဈလှယျတယျဆိုရငျတော့ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေို သခြောရှေးခယျြပွီး အသုံးပွုပေးသငျ့ပါတယျ။ သာမနျအသားအရမြေိုးပဲရှိတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျကွိုကျနှဈသကျတဲ့ အမြိုးအစားကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြပွီး ဝယျယူအသုံးပွုပေးလို့ ရပါတယျ။ ပရိသတျကွီးကော ဘယျလိုအခကျြတှနေဲ့ နလေောငျဒဏျကာကှယျဆေးကို ရှေးခယျြပွီး သုံးလရှေိ့လဲဆိုတာကို ပွနျလညျမြှဝပေေးခဲ့ပါဦး။